सर्वोच्चको आदेशपछि बादलसहितका २३ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन बैधानिक कि अवैधानिक ? - Nepal Face
सर्वोच्चको आदेशपछि बादलसहितका २३ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन बैधानिक कि अवैधानिक ?
एमालेको एकता नचाहने केपी ओली कि माधव नेपाल ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको २०७७ चैत ७ को निर्णयलाई बदर गरेको छ । गएको चैत ७ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिविना अध्यक्ष केपी ओलीको गुटले उक्त निर्णय गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन आयोजक समितिलाई बिहीबार सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । । चैत ७ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष केपी ओलीले २०७८ बैशाख २३ मा नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैशाख २८ मा बालुवाटारमा गोप्य केन्द्रीय कमिटी बैठक राखी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशपछि ती २३ केन्द्रीय सदस्य के हुने हुन् ? ती केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पनि ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई खबर नै नगरी सुटुक्क गरेका थिए ।
ओलीले प्रदेश इन्चार्जहरु समेत परिवर्तन गरी १ नम्बरमा सुवास नेम्वाङ, २ नम्बरमा बामगतीमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वी सुुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय पनि अब बदर भएको छ । र, अब कानुनी रुपमा नवौं महाधिवेशनले तोकेका इन्चार्जहरु नै पुनर्बहाली भएका छन् ।
०७७ फागुन २३ को ओली पक्षका मात्र केन्द्रीय समिति सहभागी बैठकबाट मनोनीत गरिएका २३ केन्द्रीय सदस्य
# एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति